[2019-06-07 오후 2:51:00]
यस्तै नेपालका धेरै आदिवासी जनजातिको आफ्नै मातृभाषा छ । मेयर चौधरी पनि नेपाली मातृभाषी होइनन् । यसर्थ कुनै नेपाली भाषाका जानकार जस्तो उनले बोल्ने भाँती, शैली, शब्द संयोजन गर्न नसक्नु अनौठो होइन । तर यो त रुप पक्षमात्र हो । फेरि रौद्र समयमा केही तलमाथि अवश्य हुनसक्छ । अपाच्य नै सही उनको पदीय हैसियतमा नसुहाउँदो बचन निस्कियो, निस्कन पनि सक्छ । तर, इटहरी घटनाको परिवेश मेयरले प्रयोग गरेको त्यही कथित ‘अपशब्द’ वा धमास नै मात्र हो ? के अब त्यहाँ तिनै शब्दको पैरवी गरेर उनलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउने ? पार्टीबाट हदैसम्मको कार्वाही गराउने ? थारु समुदायबाट नेतृत्वमा उठ्दै गरेको एउटा होनहार नेतालाई सिध्याउने ? शेरबहादुर तामाङ बनाउने ? लक्की शेर्पा बनाउने ? या उनले गरेको कार्वाहीमा बहस चलाउने ? उनले त भ्रष्ट, माफियालाई तह लगाएरै छाड्ने कुरा न गरेका छन् । जनताको कर सिध्याउने भ्रष्टलाई कार्वाही गर्ने विषयको महत्व कुनै शैलीगत त्रुटीका कारण सेबोटेज गर्ने ? यो काम बुर्जुवाहरुले मात्र गर्छन् । दलाल पुँजीपतिको सेवा गर्नेले मात्र सोच्न सक्छ । उनले दुर्गा पार्टी प्यालेसबाट सांस्कृतिक क्रान्तिको सुरुवात भएको ठोकुवा पनि गरिसकेका छन् । समाजवाद उन्मुख राजनीतिमा उनी इमान्दार साथ लागेको हुन भने यो काममा उनलाई सघाउनु पर्छ । र, आजको युगको उनी माओको अनुयायी रहेछन भन्ने बुझ्नु पर्छ । माओले कम्युनिष्ट पार्टीहरुमा रहेका भ्रष्टहरुलाइ जसरी सांस्कृतिक क्रान्तिताका सडकमा पछारेका थिए । त्यो गर्ने छुट हरेक नेपालीलाई छ । मेयर चौधरी त स्थानीय सरकारका प्रमुख नै भैहाले उनलाइ नहुने कुरै भएन ।
अन्त्यमा, एकजना नागरिक खगेन्द्र पराजुलीले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा लेखेका कुराप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँछु, ‘मेयर चौधरी अर्गानिक मान्छे हुन । उनलाई अरु चण्डालहरुले जस्तो लप्पनछप्पन र तिगडमबाजी गर्न आउँदैन । मनमा पाप नभएपछि आवेगको पारो जसलाई पनि चढ्छ ।’